Wiil xumaan la doonay ayay u xanuunsatay gabadhan | shumis.net
Home » galmada » Wiil xumaan la doonay ayay u xanuunsatay gabadhan
Wiil xumaan la doonay ayay u xanuunsatay gabadhan
Wiilka ayaa yiri ”Waxaan ahaa mid aanan tukan salaadda, sigaarka afuufa, xumaha iska walaaqdo, ma aanan dareensaneen dembi, toobana haba sheegin. Waxaan ku farxi jirey inaan ahay Muslim, naxariista Rabbina ay weyntahay, laakiin waxaan illawsanaa in ciqaabtiisu ay daran tahay, qabashadiisuna aanan laga baxsan karin. Weligey masjidka ma geliin, inkastoo uu weli ii dhawaa. Xilli kasta waxaan maqli jirey aadaanka salaadaha, laakiin ma ajiibi jirin. Bisha Ramadan markay soo gasha, waa bisha kaliya ee aan tukan jirey, waana soomi jirey.
Title: Wiil xumaan la doonay ayay u xanuunsatay gabadhan